My freedom: December 2011
(၂၈)ရက်နေ့က မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ် စက်ဆန်း ကူးတို့ဆိပ်ရပ်ကွက်မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ပေါက်ကွဲမှုအတွက် အခုအလှူငွေတွေ ကောက်ခံနေပါတယ်။ ရရှိတဲ့ အလှူငွေတွေကို ၈.၁.၂၀၁၂ နေ့မှာ စုပေါင်းလှူဒါန်းမှာပါ။ နိုင်ငံအလိုက် အဖွဲ့ဝင်တယောက်စီက တာဝန်ယူပြီး ကောက်ခံနေပါတယ်။
++၄၄ ၇၇၄၀ ၉၈၃၉ ၄၂
MR U JANAKA (Barclays Bank account) 20-42-73 10039764
(၃) မောင်(စွယ်စုံကျမ်း) (Kalang)
အဲ့လို အဲ့လို အသီးသီးတာဝန်ယူထားပါတယ်။ သူတို့ဆီ ဆက်သွယ်ဖို့ ဖုန်းနံပါတ်၊ ဂျီမေးလ်၊ ဖေ့ဘွတ်လိပ်စာတွေကို ဒီဆိုဒ်(နှိပ်ပါ) မှာလည်း အပြည့်အစုံရေးထားပါတယ်။ ပေါက်ကွဲမှုအဖြစ်အပျက်သတင်း ဖတ်ချင်ရင်တော့ ဒီမှာ နှိပ်ပါ။ နည်းတယ်များတယ် မဟုတ်ပါဘူး။ လှူချင်တဲ့စိတ်လေးသာ အဓိကပါ။ ကန်ဒီလည်း ပိစိညှောင့်တောင့် စလုံးဒေါ်လာ ၂၀ လှူထားပါတယ် :D :D
ဒီနေ့ဟာ ၂၀၁၁ရဲ့ နောက်ဆုံးနေ့နော်။ ၂၀၁၂အစကို အလှူအတန်းလေးနဲ့ စလိုက်ပါလား။ ပိုအဓိပ္ပာယ်ရှိသွားတာပေါ့။ အဟိ.. လှူဖို့မြူဆွယ်ပုံက သိပ်များကလေးဆန်နေလား။ ဘာဖြစ်ဖြစ် လှူရင်ပြီးရော ဒါပဲ(ဘဲ) ဟိုဟာကြက် :P
စာကြွင်း - ကိုရင်က စီပုံးမှာ ဗုံးတလုံးနဲ့ လာခြိမ်းခြောက်ထားလို့ ကြောက်ကြောက်နဲ့ ရေးရပါတယ်။ ဟီးဟီးဟီး.. နောက်တာပါ။ ဒီလိုတဖက်တလမ်းက ကူညီခွင့်ရလို့ ပျော်ပါတယ် Peace :D :D
နောက်ထပ်စာကြွင်း - အစက လိပ်စာတွေမရေးပေးဘဲ ကိုရင်ရေးပြီးသားလင်ခ့်ပဲ ပေးထားတာပါ။ လင်ခ့်ကို မမြင်ကြလို့ ကိုရင့်ဆီက လိပ်စာတွေ ပြန်ကော်ပီလိုက်ရပါတယ် =.= ကိုရင်ရေ... ခွင့်လွှတ်တယ်မလားဟင် :P
နောက်ဆုံးစာကြွင်း - အလှူငွေများ ကောက်ခံခြင်း ပြီးစီးသွားပါပြီ။ အလှူဓာတ်ပုံနှင့် သတင်းများကို ဒီလင့်ခ်လေးမှာ သွားဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင် ^_^
Posted by Candy at 11:24 AM
ဟိုနေ့က Orchard ရောက်ဖြစ်တယ်။ ဟိုနေ့ဆိုတာ ဘယ်နေ့လဲဆိုတော့ ပထမဆုံးအနီလိုင်းရထားပျက်တဲ့နေ့။ မနေ့ကလည်း ရထားပျက်တယ် ပြောတယ်။ ဗဟုသုတ အလွန်နုံချာပြီး ဘာသိဘာသာနေတတ်တဲ့ ကန်ဒီက တကူးတကသွားမဖတ်တော့ ဘာလို့ပျက်လဲ သေချာမသိပါဘူး။ အဲ့ဒီနေ့က သူငယ်ချင်းတယောက်နဲ့ City Hall မှာ ငါးကင်စားပြီး Orchard ဆက်သွားဖြစ်တာပါ။ ကိုယ်သွားမယ်ဆိုမှ ရထားကပျက်တော့ City Hall ကနေ Taxi စီးသွားတယ်။ ဘက်စ်ကားလည်း မစီးတတ်လို့လေ။ ခုဆို Orchard မှာတော်တော်လှနေပြီ။ တချို့အရုပ်တွေက မပြီးသေးပေမယ့် Christmas Tree တွေက ပြီးနေပြီ။ ဓာတ်ပုံရိုက်နေတဲ့သူတွေလည်း အများကြီးပဲ။
ဒီပိုစ့်က ဓာတ်ပုံရိုက်ချင်တဲ့သူတွေ သွားရိုက်လို့ရအောင် သတိပေးတဲ့ပိုစ့်ပါ ဟိဟိ။ ၂၅ရက်နေ့ကျရင်လည်း ရိုက်လို့ရပေမယ့် အားလုံးက ရိုက်ချင်နေကြတာဆိုတော့ လုရိုက်နေရမှာလေ။ ခုချိန်စောစောစီးစီးသွားရိုက်ထားတာ ပိုကောင်းတယ်လို့ပြောမလို့ပါ။ တကယ်တော့ ကန်ဒီက ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့သွားတာ မဟုတ်ဘူး။ ဒီတိုင်း လှတယ်ဆိုလို့ သွားကြည့်တာ။ ဒါပေမယ့် ထုံးစံအတိုင်း ကန်ဒီဘယ်သွားသွား နည်းနည်းလေးတော့ ရိုက်ရမှဆိုတော့ ဒီလိုတွေ ရိုက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
အပေါ်က အပင်နှင့်.. :)
ဒါက ကန်ဒီအကြိုက်ဆုံး Christmas Tree.. ပန်းရောင်လေး :D
ကိုယ့်ဟာကိုယ် ရိုက်တယ်ကွာ :P
အပြန်ကျတော့လည်း ဖွားဖွားကန်ဒီက ရထားပျက်နေတာမေ့ပြီး ရထားဆီသွားလိုက်ပါသေးတယ် :P .. ၂၅ရက်နေ့ကျရင် အဲ့ကိုထပ်သွားဖြစ်မလား မပြောတတ်ဘူး။ သွားတာကတော့ သွားချင်တယ်။ အဲ့နေ့ကျရင် Orchard တလမ်းလုံးပိတ်တယ်ထင်တယ်။ ပိတ်ပြီး တီးဝိုင်းတွေရော။ ပြင်ဆင်ထားတာတွေလည်း အခုထက် အများကြီးလှတယ်။ ညီမနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေသွားရင်တော့ သွားမယ်။ အဲ့နေ့က လူနည်းနည်းများတော့ ကန်ဒီတယောက်တည်း မသွားချင်ဘူး။ မတော်လို့ လူဆိုးတွေဘာတွေ ဖမ်းသွားမှ ဒုက္ခ :P
အ၀ါရောင် ခရစ်စမတ် ထရီး :P
ဘာမဆိုင် ညာမဆိုင် အရုပ်တွေနှင့် :D
မနှစ်က ခရစ်စမတ်ကတော့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ သွားဖြစ်တယ်။ ဗွီဒီယိုတောင် လုပ်ထားသေးတယ်။ အဲ့တုန်းက Orchard မသွားခင် Jurong Point Shopping Centre အရင်ရောက်သွားသေးတယ်။ ဘာသွားလုပ်တာလဲတော့ မမှတ်မိတော့ဘူး။ Orchard လမ်းမကြီးကတော့ ၂၅ရက်နေ့ဆို ဒီလိုမျိုးပေါ့။ ကန်ဒီနဲ့ ကန်ဒီ့ညီမ ပါနေတာကိုတော့ သည်းခံပြီး ကြည့်ကြပါ (ဒါလွန်ခဲ့သော တစ်နှစ်က ကန်ဒီပေါ့ :P)
အားလုံးပဲ ပျော်စရာ Weekend လေးဖြစ်ပါစေ ^_^
အားလုံးကတော့ ထင်မှာပဲ။ ကန်ဒီတယောက် ဒီအကြောင်းရေးမယ်ဆိုတော့ သူတော်တော်နားလည်လို့များလားလို့။ ဟဟဟ.. တကယ်တော့ အဲလောက်ကြီးလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ စမာတယ်ဆိုတဲ့စကားတောင် ဟိုတလောကမှ သူငယ်ချင်းတယောက်ပြောပြောနေလို့ ကြားဖူးတာ။ မြန်မာဗန်းစကားတွေကလည်း များသား။ တခါကလည်း သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ပြောတာ "သူက ပွမ်တယ်.." တဲ့။ ကန်ဒီနားလည်တဲ့ ပွမ်တယ်ဆိုတာက နားညည်းတယ်.. နားပူနားဆာလုပ်တယ်.. ပွစိပွစိလုပ်တယ်ပေါ့။ သူဆိုလိုချင်တာက ပွမ်တယ်ဆိုတာ ရွတာ.. ကဲတာတဲ့.. ဟဟဟ အဲ့ဒါသာ ကြည့်တော့ xD
ဒါနဲ့ ပြောနေတာဘယ်ရောက်သွားပြီလဲ? အင်း.. ကျူတယ် (အဲ့လို စာလုံးပေါင်းတာလား @_@).. အီတယ်ဆိုတာကို ကန်ဒီနားလည်ထားတာက တကယ်မဟုတ်ပဲ တကယ်မချစ်ဘဲနဲ့ ရည်းစားမကျ ဘာမကျစကားတွေပြော ဖုန်းတွေပြော ချက်တင်တွေထိုင်တာပါ။ ပထမဆုံး ကန်ဒီမေးချင်တာက ကျူတာကောင်းတယ်လို့ ထင်လား? ကန်ဒီကတော့ တော်တော်မကောင်းဘူးလို့ ထင်တယ်။ တဖက်လူက ကျူနေပေမယ့် နောက်လူက တကယ်ကြီးထင်ခဲ့ရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ? တဖက်သားနစ်နာပါတယ်။ ကိုယ်တကယ်ချစ်တဲ့သူလည်း မဟုတ်ဘဲနဲ့ ဘာလို့သူ့ကိုအချိန်ပေးနေမှာလဲ။ ကိုယ်တကယ်ချစ်တဲ့သူမို့ ကြိုးစားနေတာကို ကန်ဒီမဆိုလိုပါဘူး။ ခုခေတ်မှာ ကျူတာတော်တော်ရေပန်းစားတယ်။ ဘယ်လောက်တောင်လဲဆို ကျူနေရတာကိုတောင် ဂုဏ်ယူပြီးပြောနေတဲ့သူတွေ ကန်ဒီ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အများကြီးတွေ့နေရလို့ပါ။ ယောက်ျားလေးတွေလည်း ကျူတယ်။ မိန်းကလေးတွေလည်း ကျူတယ်။ အဲ့ဒီအတွက် ခံရတာက ကျူတာကိုမသိတဲ့ တဖက်လူတွေပါ။
မနေ့က အိမ်မှာမနေချင်တာနဲ့ ညနေလောက်ရောက်တော့ Bugis သွားတယ်။ တလလုံးလုံး အိမ်ကပ်နေရတာ ပျင်းလာလို့လေ။ ထုံးစံအတိုင်း တစ်ယောက်တည်းပေါ့။ ဖိနပ်လည်း ၀ယ်စရာရှိတယ်.. နောက်ပြီး Christmas အတွက် ပြင်ဆင်နေတာလေးတွေလည်း ကြည့်ချင်လို့။
Bugis Junction မှာ... အဲ့ဒါကြီးနဲ့ တွဲရိုက်မယ် :D
Candy ၏ ရိုက်ချက်.. အနောက်ကဟာလည်း မပါဘူး.. လူလည်း နှာခေါင်းပြတ်နေတယ် >.<
ရပြီကွ... :D :D
BHG မှာလည်း Sale တွေချနေတယ်.. ၀ယ်စရာရှိရင်ဝယ်ကြပါ...
လိုအပ်တာတွေ ၀ယ်ပြီးတော့ City Hall ဆက်သွားတယ်။ အဲ့မှာ ညစာစားတယ်။ 1818(ဖုန်းကတ်) ၀ယ်တယ်။ နံနံပင်ဝယ်တယ် (ဟိုနေ့က ကာလသားဟင်းချက်စားမလို့ အားလုံးဝယ်ပြီးမှ နံနံပင်မေ့ခဲ့လို့ မချက်ရသေးဘူးလေ)။ City Hall မှာလည်း Christmas Tree လေးတစ်ပင်တွေ့တယ်။ ဓာတ်ပုံမရိုက်ခဲ့ရဘူး။ City Hall မှာဆို အတတ်နိုင်ဆုံး ဘာမှမလုပ်ဘူး။ မြန်မာများတယ်လေ။ ဘာလို့လဲတော့ မသိဘူး။ မြန်မာတွေက စလုံးတွေထက် ပိုဂရုစိုက်တတ်လားလို့.. ဘယ်လိုပြောရမလဲ.. ကန်ဒီတခြားနေရာမှာ ဘာလုပ်လုပ် ဘယ်သူမှ ဂရုစိုက်ကြည့်မနေဘူး။ သူတို့ဟာသူတို့လုပ်စရာရှိတာ လုပ်နေတာ။ City Hall ရောက်ရင်မရဘူး။ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ပုံမှန်ရုပ်တည်နဲ့နေရင်တောင် စချင်နေကြတာ။ မိန်းကလေးတိုင်း အဲ့လိုပဲ အစခံရလားဟင်? ဟိုတလောကလည်း ကန်ဒီဝယ်စရာရှိတာ ၀ယ်နေတာ အပေါ်ထပ်ဆိုင်မှာ။ အဲ့ဒါ ကန်ဒီ့လိုပဲ ဈေးဝယ်နေတဲ့ လူနှစ်ယောက်က သူတို့ဟာသူတို့စကားပြောနေရာကနေ ကန်ဒီလည်းလာရော "ပြုတ်ကျသွားပြီတဲ့" ကန်ဒီက တကယ်တစ်ခုခုပြုတ်ကျတယ်ထင်လို့ လိုက်ရှာနေတာ (သူတို့ကလည်း ရုပ်တည်ကြီးနဲ့ကို)။ နောက်တော်တော်ကြာမှ "စိတ်ဓာတ်" တဲ့။ ဘယ်လောက်အမြင်ကတ်ဖို့ကောင်းလဲ >.<
ဒီနေရာက တရားဟောတဲ့နေရာလေ.. ရှိတာ သိပ်မကြာသေးဘူး.. အရင် Clementi ကျောင်းနားမှာပဲ...
ဒီနေ့မနက်ကျတော့ အာရုဏ်ဆွမ်း သွားကူတယ်လေ။ Clementi ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ။ ဖက်ထုပ်ပြုတ်ကျွေးတာ။ နောက်ပြီး ကောက်ညှင်းပေါင်း။ သရေယိုကုန်ပြီလား.. ဟဲဟဲ
ဘုန်းကြီးကျောင်းသွားတော့ အဖွားကြီးစတိုင်လ်ပေါ့ :P
အာရုဏ်ဆွမ်းကပ်တဲ့သူက နှစ်ဖွဲ့ဖြစ်သွားလို့ လူတွေများနေတာလေ.. (နောက်မှာကြည့်ရန်)
စကားမစပ် ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးတစ်ခု ပြောပြမလို့။ အမှန်အတိုင်းပြောရရင် ကန်ဒီမြန်မာကားကို ဘယ်တော့မှပြီးအောင် မကြည့်ဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဇာတ်လမ်းအလယ်လောက်ရောက်ရင် ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာ သိနေတာလေ။ ဒီကားကတော့ မြန်မာကားထဲမှာ ကန်ဒီအကြိုက်ဆုံးကားလို့ ပြောလို့ရတယ်။ ဇာတ်လမ်းနာမည်က "အငြိတစ်ချက်မှာ အသက်ပါသွားတယ်" မင်းသမီးက ဖွေးဖွေးနဲ့ ခိုင်သင်းကြည်.. မင်းသားက ခန့်စည်သူ။ အရမ်း အရမ်းကောင်းတယ်။ အပြင်မှာလည်း တကယ်ဖြစ်နိုင်ချေရှိတယ်။ ဖွေးဖွေးသရုပ်ဆောင်ထားတာ အရမ်းမိုက်တယ်။ မြန်မာသရုပ်ဆောင်ထဲမှာဆို ရဲတိုက်နဲ့ ဖွေးဖွေးကိုကြိုက်တယ်။ ဇာတ်လမ်းအကြောင်းကို မပြောပြတော့ဘူး။ ကြည့်မယ့်သူတွေ အရသာပျက်သွားမှာစိုးလို့။
စိတ်ထဲရှိတာတွေ အများကြီးပဲ။ အပြင်မှာဆို သူများကို ထုတ်ပြောလေ့မရှိဘူး။ ထုံးစံအတိုင်း ဒီမှာပဲ ရေးပါရစေ။ စာမေးပွဲလည်း ပြီးပြီလေ :D
ဟိုတလောက သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် လင်ခ့်ပေးတာနဲ့ ဘလော့ဂါတွေကို ဖဲ့ထားတဲ့ ဆိုဒ်လေးဆီ ရောက်သွားတယ်။ အထူးသဖြင့် ကန်ဒီ့လိုစာမျိုး ရေးတဲ့သူတွေကိုပေါ့။ ဖတ်ပြီး စိတ်မကောင်းဘူး။ အားလုံးကိုခြုံပြီး ဖဲ့ထားတယ်။ တချို့ကိုဆို နာမည်နဲ့တောင် ဖဲ့ထားတယ်။ ကန်ဒီအံ့သြသွားတယ်။ ဒီလိုဆိုဒ်မျိုးလည်း ရှိတယ်ပေါ့ ဆိုပြီး။ လူတယောက်နဲ့ တယောက် အကြိုက်ချင်းမတူနိုင်ဘူးဆိုတာ ကန်ဒီနားလည်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတပါး ၀မ်းနည်းအောင် စိတ်မကောင်းဖြစ်အောင် အပင်ပန်းခံပြီးတောင် ရေးပြီးပိုစ့်တင်မယ်လို့ ကန်ဒီ မထင်ထားဘူးလေ။ နောက်ပိုအံ့သြသွားတာက သူ့ပိုစ့်အောက်မှာ ရေးတဲ့comment တွေက သူ့ကိုအားပေးထားကြတယ်။ ဒါနဲ့ ကန်ဒီစဉ်းစားမိတယ်။ ကန်ဒီ့ပိုစ့်တွေဖတ်မိပြီး ကန်ဒီ့ကို မုန်းနေတဲ့သူတွေလည်း ရှိနိုင်တာပဲလို့။ အကြောင်းရင်းတော့ ကန်ဒီနားမလည်ဘူး။ ဟိုရက်ပိုင်းကလည်း မမရိုစ့်ဆီ နှောင့်ယှက်တဲ့ comment တွေရတယ်ဆိုလို့ စိတ်မကောင်းဘူး။ ဘာလို့များ အဲ့လိုတွေလုပ်လဲဆိုတာ စဉ်းစားလို့ မရဘူး။ လူတိုင်းမှာ သူ့ခံယူချက်နဲ့ သူရှိတယ်လေ။ သူ့ဟာနဲ့သူတော့ မှန်နေတာပဲ။ ကိုယ်မကြိုက်လို့ သူမှားတယ်လို့ ပြောလို့မှ မရတာ။ ကန်ဒီဆို ကန်ဒီ့ဆိုဒ်မှာတင်တဲ့ ပုံတော်တော်များများကို ကန်ဒီရိုက်တာဖြစ်ချင်တယ်။ မတတ်သာမှ Google ကယူချင်တယ်။ အဲ့လိုပေါ့။ ဘလော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ဖန်တီးထားပုံတွေကလည်း ရေးတဲ့သူရဲ့ ခံယူချက်ကိုလိုက်ပြီး ကွဲပြားမှာပဲလေ။ အဲ့လိုပဲ စာဖတ်တဲ့သူတွေမှာလည်း သူ့အကြိုက်နဲ့သူရှိတာပဲ။ ကဗျာတွေ၊ ၀တ္တုတိုတွေဖတ်ချင်တဲ့ သူကျတော့ ကန်ဒီ့ဆီဘယ်လာမလဲ။ ဒီလိုပေါ့။ အားလုံးသူ့ဟာနဲ့ သူမှန်နေကြတာချည်းပဲလေ။
ခုနကပြောသလို မကောင်းမြင်တဲ့လူကလည်း လူနည်းစုပဲဖြစ်မှာပါလေ။ မြန်မာအများစုက ကိုယ်ချင်းစာတရားထားတဲ့နေရာမှာ သူများထက်ပိုတယ်လို့ ကန်ဒီယုံတယ်။ ဟိုတလောက ကန်ဒီစိတ်ညစ်တော့ပဲ ကြည့်လေ။ ဘလော့မောင်နှမတွေ အပြင် comment မရေးဖူးတဲ့ သူတွေကပါ လာအားပေးသွားတော့ အရမ်းပျော်တယ်။ စိတ်သက်သာရာ ရတယ်။ မမ မဒိုးကန်ဆို ပိုစ့်လေးတောင် သီးသန့်ရေးပြီး အားပေးထားတယ်။ တကယ်အားရှိတာပါ။ အဲ့အချိန်မှာ ဒီဘလော့လေးရှိနေတာကိုပဲ ကျေးဇူးတင်မိတယ်။
ခုခရီး အရမ်းသွားချင်နေတယ်။ နီးနီးနားနား မလေးကို သွားမယ်ဆိုတော့လဲ သွားလို့ အဆင်မပြေဘူး။ ကန်ဒီ့အစ်မ၀မ်းကွဲကမလေးမှာ ရှိတယ်လေ။ သူ့ကို လာမယ်ပြောမလို့ စကားစရုံရှိသေးတယ်။ သူက နေမကောင်းဘူးတဲ့။ အလုပ်လည်း ရှုပ်နေတယ်တဲ့။ အဲ့ဒါနဲ့ ဆက်မပြောဖြစ်တော့ဘူး။ ကန်ဒီ့ သူငယ်ချင်းတွေမလေးသွားမှာ ဒီလကုန်.. ရန်ကုန်က Tour နဲ့ S$ 550 တဲ့။ ဈေးကြီးလားလို့။ ကန်ဒီလိုက်လို့လည်း မဖြစ်ပါဘူး။ အစ်မရှိရဲ့သားနဲ့ Tour နဲ့သွားရင် အိမ်ကပြောမှာပေါ့။ မလိုက်တော့ဘူးလို့ ငြင်းထားတယ်။ တကယ်တော့ သွားချင်နေတာ။
ဒီနေ့တောင် ကျောင်းကအပြန်ကားစောင့်ရင်းနဲ့ တခါမှမတွေ့ဘူးတဲ့ Singapore-Malaysia ဆိုတဲ့ ကားကြီးတွေ့သေးတယ်။ သွားချင်နေပါတယ်ဆို စိတ်ကိုလာဆွနေတယ် =.=
ခရီးဆိုလို့ ကန်ဒီ့ညီမ ရန်ကုန်ပြန်တုန်းက ပြင်ဦးလွင်သွားတယ်လေ။ အဲ့မှာ သူရိုက်လာခဲ့တဲ့ ပုံလေးတွေ အမှတ်တရတင်ဦးမယ်။ ကန်ဒီ့ပိုစ့်မှာ ဓာတ်ပုံမပါရင် စိတ်ထဲတစ်မျိုးကြီး :P
သူတို့ တ၀တပြဲ စားခဲ့သောက်ခဲ့ကြတယ်လေ..
ပုရစ်ကြော်က ကြောက်စရာကြီး.. စားရဲပါဘူး >.<
ပန်းကအပြာရောင်လေး.. လှလိုက်တာ ^_^
ကန်ဒီ ပြင်ဦးလွင်မြို့ကို အရမ်းကြိုက်တယ်။ အဲ့ဒီမြို့ကို အဓိကကြိုက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းက ပန်းတွေကြောင့်။ ကန်ဒီပန်းအရမ်းချစ်တယ်။ ငယ်ငယ်တုန်းက အတန်းပိုင်ဆရာမကို နှင်းဆီပန်းလေးတွေဝယ်ပြီး ပေးတယ်။ ဆရာမခေါင်းမှာ ကန်ဒီပေးတဲ့ပန်းလေး ပန်ထားတာကို တနေ့လုံးကြည့်ပြီး ပျော်နေတတ်တာလေ။ ညနေကျ ဆရာမခေါင်းပေါ်က နှင်းဆီပန်းလေး ညှိုးသွားရင်ဝမ်းနည်းသလိုလို။ ဒါနဲ့ နောက်ပိုင်းကျတော့ နှင်းဆီပန်း မပေးတော့ဘူး။ သစ်ခွပန်းပေးတယ်။ သစ်ခွပန်းဆို ညနေရောက်လည်း မညှိုးလို့လေ။ ဒါလည်း စိတ္တဇတမျိုးပဲနော်။
သူပြန်လာတော့ ထုံးစံအတိုင်း ရန်ကုန်က စားစရာတွေပါလာတာပေါ့။ ကန်ဒီက ခုချက် ခုစားရတာကို ပိုကြိုက်တယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် အမေ့ကို စားစရာအခြောက်တွေ သိပ်မထည့်ပေးနဲ့လို့ ပြောထားတယ်။ အဲ့တော့ ဘာထည့်ပေးလဲ သိလား။
ဟင်းအနှစ်တွေနဲ့ လက်ဖက်.. အားလုံးအဆင်သင့်..
ကန်ဒီ့ကို ကြက်သွန်တောင် ဆီမသတ်တတ်သေးဘူး ထင်နေလား မသိဘူး :P
နောက်ပြီး ဒီအင်္ကျီ။ အဲ့ဒါမျိုး ၄၊ ၅ ထည်လောက်ပါတယ်။ အိမ်မှာနေရင်း ၀တ်ဖို့တဲ့။ အိမ်မှာနေရင်း ၀တ်ဖို့များ တကူးတကအင်္ကျီစ၀ယ်ပြီး ချုပ်ပေးနေသေးတယ်။ ဒီလောက် ရယ်ဒီမိတ်တွေ ပေါနေတာကို >.<
အမေက သူချစ်တာကို လိုအပ်တာတွေဖြည့်ဆည်းပေးပြီး ဖော်ပြတတ်တယ်။ စကားလုံးတွေ အပြုအမူတွေနဲ့ မဖော်ပြတတ်ဘူး။ (ကန်ဒီ သူ့ဆီက အမွေရထားတာ အဲ့အကျင့်တွေလည်းပါတယ်။) တခါတလေ စကားလုံးနဲ့ ဂရုစိုက်တာမျိုးတွေ လိုချင်ပေမယ့် ခွဲနေရတဲ့ အချိန်မှာတော့ ဒီလိုမျိုး လိုတာလေးတွေ လုပ်ပေးတာနဲ့တင် မိဘမေတ္တာကို အများကြီးခံစားရပါတယ်။
ပိုစ့်က အရမ်းရှည်သွားပြီလား မသိဘူး...
အခု 1:33 AM
Posted by Candy at 12:48 AM